“ဈေးသည်” (ဓါတ်ပုံပြပွဲ ၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » “ဈေးသည်” (ဓါတ်ပုံပြပွဲ ၁)
“ဈေးသည်” (ဓါတ်ပုံပြပွဲ ၁)
Posted by ချစ်ရင်ထူး II on May 10, 2012 in Myanmar Gazette, Photography | 108 comments
ဓါတ်ပုံပြပွဲဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ကလေးဖြစ်တာမို့ ကျွန်တော့်စိတ်ကူး အဖြစ် ပိုစ့်တင်ခဲ့ပါတယ် ။ ပိုစ့်တင်ပြီးရင်ပဲ အိမ်က ကွန်ပူတာ ခပ်စုတ်စုတ် က နာမကျန်းဖြစ်တာအကြောင်းပြပြီး ဆေးခန်းမှာ နှစ်ရက်လောက် အနားယူနေတာနဲ့ ကျွန်တော် ပျောက်နေ တုန်း ဆြာဂီရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော့် စိတ်ကူးလေးအဆင်ပြေခဲ့ရပါတယ် ။
တစ်ကယ်တော့ကျွန်တော်က ဝါသနာရှင် အဆင့်ပဲရှိတာပါ ။ Professional မဟုတ်ပါဘူး ။သုကြီး နဲ့ ကိုဂီတို့ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ။ကျွန်တော့် ကွန်ပျူတာလေး ပြန်ကောင်းတော့ ပိုစ့်ကိုပြန်ဖတ်မိပါတယ် ။ ကျွန်တော်လည်းချက်ချင်းပဲ ကိုဂီနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ ခေါင်းစဉ်ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ် ။ ယ္ခုလ 27.5.2012 ညနေ 5.00(မြန်မာစံတော်ချိန်)နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ mgazettephotoshow@gmail.com ကိုပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ရိုက်ကူးတင်ပို့ပေးရမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ ဈေးသည် ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုမှော်ကလည်း မန့်ထားပါတယ် ။ ခေါင်းစဉ်ကို သုံးလ စာလောက်ရေးပေးဖို့ပြောတော့ ကျွန်တော် စဉ်းစားထားတာလေးရှိပါတယ် ။ June လအတွက်ကို ချစ်စရာ့အရွယ် လို့ရွေးချယ်ထားပါတယ် ။ July လအတွက်ခေါင်းစဉ်ကို ရွာရဲ့ ဓါတ်ပုံဆြာကြီး ကိုမှော်ဆရာ ကို အကူအညီ တောင်းခံအပ်ပါတယ် ။August လအတွက်ကို ကိုလုလင် က ကူညီရွေးချယ်ပေးပါ ။ Stptember လအတွက်ကိုတော့ ကိုစိန်သော့ ကိုအပ်ပါတယ် ။ ကူညီပေးကြပါဦး ။
အမျိုးအစား ……… ဆေးရောင်စုံ
ဖိုင် အမျိုးအစား……. JPEG
အရွယ်အစား…….. 800×600 px
သီးခြားဖော်ပြရန်……fnumber , ISO , Shutter speed
ကန့်သတ်ချက် …. ရေစာ ၊ ဘောင် ၊ လက်မှတ် ထည့်သွင်းခြင်း မပြုရ
ဓါတ်ပုံလက်ခံ ပိတ်ချိန်.. ၂၀၁၂ မေလ ၂၇ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၅နာရီ .
ပေးပို့ရမည့် လိပ်စာ… mgazettephotoshow@gmail.com
ပြပွဲမှာ ရွာသူ/ရွာသားများကရွေးချယ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ ကော်မန့် အများဆုံး (၃)ပုံကို သူကြီး ၊ ကိုဂီ နှင့် ကျွန်တော် (ချစ်ရင်ထူး) တို့မှ ဆုချီးမြှင့်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။အခြား ဆုအလှူရှင်များ ရှိလျှင်လည်း ထပ်မံ ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ။
နောက်လ(June)အတွက်ခေါင်းစဉ်ကိုလည်း မမေ့နဲ့ဦးနော် .. ချစ်စရာ့အရွယ်
အကောင်းဆုံး လက်စွမ်းပြနိုင်ကြပါစေ . . .
မခိုင်သမီးလေးကို မြင်ဖူးရဦးမှာပေါ့နော် .. အမေတူ သမီးလေးလား မခိုင်ခိုင် ..
သိန်း (၃၀) ဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ စဉ်းစားပြ စေဦးနော် ..
အံမယ် မောင်ရင်ထူး အမသမီးပုံကိုမပြိုင်ပါဘူး …….. အမေတူသမီးမဟုတ်ပါ အဖေတူသမီးလေး ပါ ……. သိန်း (၃၀) ဆိုတာ အသားတင်ပေးရမှာနော် ကြားမှာ (၅) သိန်းလောက်ကုန်ဦးမယ် အဲဒီအလုပ်ကိုရဖို့ (၁) နှစ်လောက်ကြာမှာ ……… ကိုယ့်အလုပ်ပဲ ကိုယ်အေးဆေးဆက်လုပ်ပါ မောင်ရင်ထူးရယ် …….
ဒီလိုမှန်းမသိလို့ပါ သိရင်စစ်ကိုင်းရောက်တုန်း စစ်ိကိုင်းဈေးမှာရိုက်ခဲ့ပါတယ်
လိုချင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး အမှတ်တရသိမ်းထားချင်လို့ပါ ဟီးဟီး………
ခရထ-၂ ကင်မလာ အိတ်
kyi noo says:
သတ်မှတ်ချက်တွေက သိချင်ပါတယ်… သိတဲ့လူဟြေပြပါလား !
မန်ဘာ အသစ်ထင်ပါ့ ..
အစ်ကိုပြော(မေး)တဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေ ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုမှန်း မသိတော့ ဖြေလို့ရဘူးဖြစ်နေတယ် ..
အပေါ်မှာ ပိုစ့် တွေ ရှိပါတယ် ဖတ်ပြီးတော့ မရှင်းတာရှိရင်
chityinhtoo374@gmail.com ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် mgazettepotoshow@gmail.com ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် Add ပြီးတော့ မေးနိုင်ပါတယ် ..
မနေ့က ရန်ကုန်တရုတ်တန်းထဲ လမ်းလျှောက်သွားရင်း ရှေ့က လူ၂ယောက် ကင်မလာကြီးတစ်ဖက် အိတ်တစ်ဖက်နဲ့ ဘဲကင်တွေ့ ဘဲကင်သည်ရိုက်၊
ကြံရည်သည်တွေ့ ကြံရည်သည်ရိုက် ၊သစ်သီးသည်တွေတွေ့ သစ်သီးသည်တွေရိုက် တွေ့ရတော့
ဟဲဟဲ ကိုယ့်လိုပဲ ဈေးသည်ရှာတဲ့ ရွာသားတွေလား ထင်မိတယ်။
ကင်မလာ ကိုင်တဲ့ တစ်ယောက်က စပို့ရှပ် နက်ပြာမှာ Paul Smith စာတမ်းပါတဲ့ အင်္ကျီဝတ်ထားတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ သဂျီးနှင့် အပေါင်းအပါများ ရဲဗဒေါင်းခတ်နေလဲ မသိဘူး။
ဒီလအတွက် က ဘယ်နေ့နောက်ဆုံးလဲဟင် ….
ရဲရဲတောက် ဒို့ဗမာတွေပါလား ။
ရွာထဲမှာ စိန်ပန်း နီနီတွေပွင့်နေတယ် ။
ဈေးသည်ရှာရခက်နေရင် အကြံပေးလိုက်မယ် ။
ဘတ်စ်စကားပေါ်မှာ ဈေးလိုက်ရောင်းတဲ့ပုံလေးတွေရိုက်ပြီး ပြိုင်ကြည့်ပါလား ။
ကျုပ်လည်း.. .. လင်န်းစ်မှာထားတာ.. အချိန်မမှီတာမို့.. နကိုရိုက်ထားတဲ့ပုံပဲ..ပို့တော့မယ်..
ပုံတွေတက်လာရင်.. Pollစံနစ်နဲ့ ဗုတ်လို့ရအောင်.. တင်ပေးမယ်ဖြစ်ပါကြောင်း..
ပို့မယ် ပြောထားတဲ့ အမာခံတွေ
ကျန်တဲ့ လူတွေ ကိုပဲ လောရမလား..
နောက်၁ပုံစီ ထပ်ချီးမြှင့်ကြပါ ပြောရမလား မသိတော့ပါ…
ဆန်းဒေးညနေ မှာ ပြောထားတဲ့အတိုင်း တင်ချင်ပါတယ်…
သည်ညနေ မေးလ်ပြန်စစ်ပြီး ဘယ်နှပုံရကြောင်း
စုစုပေါင်း ၂၀ကျော် လောက် တော့ မျှော်လင့်ထားပါကြောင်း…
ပေးသမျှ အကုန်တင်မှာ ဖြစ်လို့ …
ကျန်ခဲ့တာ ချန်ခဲ့တာ မရှိကြောင်း …
ကျနော့်ကို ကောင်တာ ချက် လို့ရအောင်
ခ-ရ-ထ-၂ နဲ့ သဂျီး ကို အကောင့် ပါ့စ်ဝါ့ဒ် ဆန်းဒေးကျရင်
18-270mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD Lens for Nikon
လောလောဆယ်တော့ကိုပေါက်ကို ရွှေမင်းသားက စိန်ပြောင်းလက်ဆောင်ပေးထားတယ်
Green Rose ကတော့ တိုင်းသိ၊ ပြည်သိ၊ ကမ္ဘာကသိတဲ့ ဈေးသည်တွေကိုပဲ ရိုက်ချင်တယ်။ မြေပုံကြီးရှေ့ချ၊ ဟိုဟာရောင်းစား၊ ဒီဟာရောင်းစားလုပ်တဲ့ ဟိုလူကြီးကိုရိုက်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလား? ………..ဒါမှမဟုတ် …… လောလောဆယ် Hot ဖြစ်နေတဲ့ ….. ဟိုဟာတွေပိုလို့ ရောင်းစားပါတယ်ဆိုတဲ့လူကြီးပုံ ရိုက်ပြီးတင်လိုက်ရင် ကောင်းမလား? … ( Ready.. Say.. Cheese ဆိုပြီးတော့လေ) (ကင်မရာနဲ့တော့မဟုတ်ဘူး.. ဒုတ်နဲ့)
အင်း.. ဒီတစ်ခုကိုတော့ အတည်လို့ မပြောပါရစေနဲ့ ညလေးရယ်
အတည်က နောက်မှပြောမယ်လေ နော်..
တင်ဖို့ လုပ်နေဘီ သဂျီးရေ…
ဖိုင်းယား ဖော့စ့် နဲ့ သဂျီးရဲ့ အေပီအိုင်
ကော် မကောင်းဘူး ဆို …
၂၁မက်ဂါဘိုက်တောင် ပါရဲ့.. ပို့တဲ့ထဲ …
ဗြဲ …(မျက်၇ည်များ …)
ဟတ်ကဲ့ ပြန်ချုံ့ပြီး တင်နေပါတယ်ဗျား …
နီးမှ ပို့သူတွေများလို့ …နည်းနည်း စောင့် ပေးကြပါလို့ ….
မပြရင် ပြောင်းဖူးရိုးနဲ့ ပေါက်တော့မယ် …
ဟောဟော ပြပြီ ပြပြီ
(ကမ္ဘာမကြေ မြန်မာပြည် ….)